कांग्रेसमा भत्कियो प्यानलको पर्खाल | KhabarWay.com Nepali News
कांग्रेसमा भत्कियो प्यानलको पर्खाल
२ पुष २०७८, शुक्रबार ०८:३२
काठमाडाैं, २ पुस । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले ‘प्यानल’ रोजे तर त्यसपछिका उपसभापति र महामन्त्री पदमा भने ‘व्यक्तित्व’ रोजेका छन् ।
यी पदमा फरक–फरक प्यानलबाट उठेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । महामन्त्रीमा बिहीवार गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी बनेका हुन् ।
थापा डा. शेखरप्रसाद कोइराला र शर्मा प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए । सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए पनि महामन्त्रीमा उनको समूहका दुवै उम्मेदवार पराजित भएका छन् । देउवाको पक्षबाट प्रदीप पौडेल र डा. प्रकाशशरण महत प्रत्याशी थिए ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार थापाले सर्वाधिक ३ हजार २३ मत ल्याएका छन् । त्यसपछि शर्मा १ हजार ९८४ मत ल्याएर विजयी बनेका छन् । पौडेलले १ हजार ३९३ र डा. महतले १ हजार ५५६ मत पाएका छन् ।
डा. कोइराला पक्षका डा. मीनेन्द्र रिजालले ८०९ र विमलेन्द्र निधि पक्षका डा. राजाराम कार्कीले १०६ मत पाएका छन् ।
उपसभापतिमा देउवा समूहका पूर्णबहादुर खड्का र डा. कोइराला समूहका धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । समितिले उपसभापतिको मतपरिणाम बुधवार घोषणा गरेको थियो ।
खड्काले २ हजार १२१ र गुरुङले १ हजार ९०८ मत पाएका थिए । देउवा प्यानलका विजयकुमार गच्छदारले १ हजार ९०६ मत पाए । गुरुङले गच्छदारभन्दा २ मत बढी पाएर जितेका हुन् । डा. कोइराला समूहका चन्द्र भण्डारीले १ हजार ५८०, सिंह प्यानलकी सुजाता कोइरालाले ६४४ मत पाइन् ।
नयाँ अनुहार देख्ने कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार महाधिवेशनबाट मिश्रित नतिजा आएको नेताहरू बताउँछन् । उपसभापतिमा पराजित भण्डारी भन्छन्, ‘रूपान्तरण नेतृत्वमा देख्न चाहेको रहेछन् भन्ने देखियो । सभापतिको प्रतिस्पर्धामा सम्मानजनक नतिजा आउनुले पनि अब पार्टीमा प्यानल र गुट प्रभावहीन भइसके भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ । अब क्षमतावान नेतृत्व पार्टीमा चाहिन्छ भन्ने जनतामा छ । कांग्रेसमा व्यावहारिक रूपमा पनि यो लागू भयो ।’
कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनदेखि मात्रै उपसभापति पदमा निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रणाली शुरू गरेको हो । यसअघि सभापतिले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई उपसभापति बनाउने वैधानिक व्यवस्था थियो । यसपटक भने सामूहिक नेतृत्व प्रणाली आवश्यक भएको भन्दै कांग्रेसले उपसभापति पदमा पनि निर्वाचन गरेको हो ।
उपसभापतिमा निर्वाचित खड्काले २०४५ सालदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका छन् । उनी १३औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । देउवाले २०७५ मा महामन्त्रीमा मनोनीत गरेका थिए ।
पछिल्ला २ वर्षदेखि उनी देउवाका ‘विशेष दूत’को भूमिकामा देखिएका छन् । उनी ०४८ मा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । ०५१ को मध्यावधि चुनाव जितेपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति बने । खड्काले गृह, सूचना तथा सञ्चार, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, वातावरण र उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएर काम गरिसकेका छन् ।
अर्का नवनिर्वाचित उपसभापति गुरुङ नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको एजेन्डा लिएर उम्मेदवार बनेका थिए । उनी विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीमा आएका हुन् । निर्वाचित भएपश्चात् गुरुङले भने, ‘मेरो मुद्दाले सार्थकता पाएको महसूस भएको छ । अब पार्टी नयाँ रफ्तारमा अघि बढ्छ । उनी १२औं र १३ औं महाधिवेशनबाट आदिवासी जनजाति कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । उनी पार्टीमा तेस्रो पुस्तामा गनिन्छन् ।
उनले १४औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा महामन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । उनी ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाए ।
४५ वर्षीय थापा नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री भएको १० वर्षमै पार्टीको महामन्त्री बनेका हुन् । उनी ३१ वर्षको उमेरमा सांसद बने । ३४ वर्षमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । २०७० र २०७४ सालमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भए ।
महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि थापाले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मैले पाएको मतको सम्मान गर्दै अब म थाक्न र पछि हट्न पाउँदिनँ । आजैदेखि मेरो परीक्षा शुरू भएको छ । अझै जिम्मेवार ढंगले म अघि बढ्छु ।’
थापाबारे विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘गगन पब्लिक लिडर हो । यसकारण उहाँलाई एकपटक कार्यकर्ताले परीक्षण गर्न चाहेका छन् । महामन्त्री पद उहाँका लागि पार्टीको राजनीतिमा टर्निङ प्वाइन्ट हो ।’ महामन्त्रीमै निर्वाचित शर्मा विद्यार्थी जीवनबाट नै राजनीतिमा होमिएका हुन् । शर्मा २०४० सालमा ८ कक्षामा अध्ययन गर्दा नै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) धुलाबारी स्कुलको सभापति बनेका थिए । २०५३ सालमा संघका महामन्त्री बने । २०५७ सालमा संघको सभापति नै बने । २०७० र २०७४ सालको निर्वाचनमा पराजित भए । उनी २०७२ सालमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । देउवाले २०७४ सालमा पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुम्पिए ।
महामन्त्री निर्वाचित भएपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माले भने, ‘पार्टीमा रूपान्तरणको मुद्दा ल्याएका थियौं । अहिलेको महाधिवेशनले नेतृत्व रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अब हामी वैचारिक रूपान्तरणतर्फ लाग्छौं ।’
शर्मालाई नजिकबाट चिन्ने नेता एनपी साउँद भन्छन्, ‘हामी एउटै टीममा बसेर लामो समय काम गरेका छौं । उहाँलाई सधैं केही न केही नयाँ गरु भन्ने हुटहुटी लागेको देख्छु । अब साँच्चिकै काम गर्ने स्थानमा पुग्नुभएको छ । के कति गर्न सक्नुहुन्छ । जुझारु टीम आएको छ । काम गर्ने वातावरण मिल्ला ।’
कांग्रेसमा यसपटक सभापतिसहित १३४ पदमा निर्वाचन भएको छ । नतिजा आउने क्रम जारी छ । सभापतिपछि उपसभापति हुँदै महामन्त्री पदको मतगणना गरिएको थियो ।
यसैबीच महामन्त्रीमा पराजित भएलगत्तै डा. मीनेन्द्र रिजालले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टीमा आफ्नो राजनीतिक पुँजी नभएकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको डा. रिजालले बताए । उनले बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
उनले राजनीतिक सम्पत्ति गुमाएको महसूस भएको पनि उल्लेख गरे ।
यसैबीच सहमहामन्त्रीमा महिलातर्फ महालक्ष्मी उपाध्याय डिना निर्वाचित भएकी छन् । उपाध्यायले देउवा पक्षबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । आदिवासी जनजातितर्फ देउवा समूहकै भीष्मराज आङदेम्बे निर्वाचित भएका छन् । दलिततर्फ भने डा. कोइराला टीमका जीवन परियार विजयी भएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।